Iindawo ezi-7 ezintle kakhulu e-Itali | Iindaba Zokuhamba
Iindawo ezi-7 ezintle kakhulu e-Itali
Susana Garcia | | Iindawo ezibalekayo eYurophu, ngokubanzi, Italia
Xa sicinga nge-Itali sihlala siyidibanisa neRoma kwangoko, kwaye ngokuqinisekileyo sisixeko esihle ngokwenene. Kodwa kuninzi kakhulu ukubona. Ngokwenyani ziindawo ezili-10 kuphela ezimbalwa, kuba i-Itali izele ziikona ezinomtsalane, iindawo ezinembali kunye needolophu ezinomtsalane, kodwa kuya kufuneka uqale ngento, ke senza olu luhlu lubalulekileyo kuwe.
Le yile Iindawo ezi-7 e-Itali ukuba masibone phambi kwayo nantoni na eyenye. Sineendawo ezinezikhumbuzo, izixeko ezisemanzini, iidolophu eziselunxwemeni nokunye okuninzi. Ungaphoswa lolu khetho lubalaseleyo lweendawo ukuba ucinga ukuphucula i-Italiyane yakho, kuba zonke zinento enomdla enokusenza sihlale kwaye sihlale kule ndawo.
1 Imbali yaseRoma
3 Ubugcisa bukaFlorence
4 Utyekelo lwePisa
5 Iphupha eCinque Terre
6 Iiholide zikaCapri
7 Isixeko esingcwatyelwe ePompeii
Into emayithethwe ngeRoma esingayazi ngaphambili, kwaye yaziwa njenge ISixeko sanaphakade ' kuba kubonakala ngathi ixesha alihambanga kuyo kangangeenkulungwane ezininzi. Uninzi lwezikhumbuzo zoBukhosi baseRoma zisemi, ezinje ngeColosseum edumileyo, lolona tyelelo lubalulekileyo. Ukongeza kwiColosseum sineTrevi Fountain edumileyo yokwenza iminqweno, singatyelela iPantheon yaseAgripa kunye nethala layo elikhulu okanye undwendwele iQonga laseRoma elibuyela emva ngexesha.
EVenice, enye yezona zixeko zithandwayo emhlabeni zisilindele, kwaye yenye yezona zinto zintsusa, kuba ibekwe emanzini. I <em> gondola ikhwela kwizitrato zayo nakwezona ndawo zidumileyo zizinto ezingafane ziphoswe. Inkqubo ye- Rialto ibhulorho Ngenye yezona zidala ziwela imijelo, kwaye ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zidumileyo, ke ngoko ukugqitha kuyo kunyanzelekile. Kwelinye icala, musa ukulibala ukutyelela iSan Marcos Square, ukuzisa ii-wellies ukuba zikhukula. Kuyo siya kufumana i-Ducal Palace kunye ne-Basilica yaseSan Marcos. Endleleni sinokuma nakwezinye zezona zakhiwo zibalaseleyo zesixeko ezihlala kwiimyuziyam ngoku.
IFlorence sisixeko esifanelekileyo kubathandi bobugcisa, kwaye kuyo apho sinokubona amawaka ezikhumbuzo kunye nemisebenzi ngamagcisa anje UMichelangelo okanye iGiotto. Ukuba siqala ePiazza del Duomo siza kuba kwenye yeendawo ezinezikhumbuzo ezininzi zokuzibona, kuba yiCathedral okanye iDuomo, iCampanille kunye neBattistero. Enye indawo abafuna ukuyibona bonke abatyeleli yiPonte Vecchio, enezindlu zayo ezidumileyo ezixhonyiweyo kunye neengcibi kunye neevenkile ngaphakathi. Enye yeyona bhulorho ikhethekileyo emhlabeni, kunye nebhulorho endala yamatye kuyo yonke iYurophu.
IPisa idume ngayo inqaba eyonda, kwaye ikwanezikhumbuzo ezinesitayile esikhethekileyo, isitayile sePisan, esili-Romanesque esichazwe ngokutsha ngamaPisans. Ukutyelela iPisa akusoze kuthathe ngaphezu kosuku, kwaye eyona nto inomdla ikufutshane nenqaba yasePisa, ekufuneka uyinyukile ukonwabele iimbono zayo. Ecaleni kwayo kukho iDuomo kunye neBhaptizi.
Iphupha eCinque Terre
ICinque Terre yi indawo eneedolophu ezintlanu: IVernazza, iCorniglia, iMonterosso al Mare, iRiomaggiore neManarola. Ngenxa yenani elandayo labatyeleli, abasemagunyeni bacinga ngokulawula ukhenketho kunye nokunciphisa inani labatyeleli ngonyaka. KwiCinque Terre sifumana iilali ezintle ezingaselunxwemeni ezibonakala ngathi zinqunyanyisiwe emaweni, zinezindlu ezimibalabala ezithi zibonise ukuba ziyaphupha. Kodwa ikwayindawo enexabiso elikhulu lendalo ngeendlela ezininzi zokunyuka intaba.
ICapri yayisele inamaxesha amaRoma isiqithi ukuze Ihlobo lodidi oluphezuluKuba iindawo zokuhlala zaseRoma zikhona. Ngenkulungwane ye-XNUMX yaphinda yaba yindawo ebukekayo yehlobo kwakhona. Ukutyelela iCapri kukubona enye yezo ndawo zizele ngumtsalane wase-Italiya nobuhle. Indawo apho singonwabela khona iilwandle kunye nonxweme, kunye neembono ezinyukayo kwisiqithi se-funicular.
Isixeko esingcwatyelwe ePompeii
Wonke umntu uya kulazi ibali lasePompeii, umzi wakudala lowo wangcwatywa phantsi kogqabhuko-dubulo lweVesuvius, ngo-AD 79. Sakuba singcwatywe ngequbuliso, isixeko sahlala sinje, kwaye nemilo yemizimba yabemi bayo, yothuswe lulo dubulo, iyagcinwa. Esi sixeko sikwimeko entle yolondolozo ngoko ke sisinika umbono wokuba babephila njani ngelo xesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Iindawo ezi-7 ezintle kakhulu e-Itali
I-Chinese gastronomy, izimbo ezisibhozo ezimnandi kakhulu
ICanberra, ikomkhulu laseOstreliya